Isticmaalka turjubaanka - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Isticmaalka turjubaanka
Haddii aad qaxooti tahay, waxaad xaq u lee dahay turjubaan in laguu qabto markii aad u baahan tahay adeegyada sooshalka iyo caafimaadka. Turjubaanku wuxuu kaa caawimayaa sidoo kale wada shaqaynta u dhexaysa gurigaaga iyo iskoolka caruurtaada.
Turjubaanku wuxuu afkaaga kuu badalayaa oo kuugu turjumayaa waxa qofka shaqaalaha dawaladda ahi kugula hadlayo. Turjubaanku si kale uma caawimayo adiga iyo qofka shaqaalaha dawladda ah toona. Caruurtu kuma shaqayn karto oo looma isticmaali karo turjubaan ahaan.
Hawl-wadeenka dawladda ayaa turjubaanka dalba, markii loo baahan yahay.
Markii aad qaadato jinsiyada Finland, luuqadda si fiican oo kugu filan ayaad u taqaan, sidaas aawadeed adigaa danahaaga ka dhamaysan kara shaqaalaha dawladda. Hase ahaatee haddii aad turjubaan u baahan tahay kala hadal qofka shaqaalaha ah ee aad danta ka lee dahay oo doonayso inaad la hadasho. Qofkaas ayaa kuu qabanaya turjubaan, haddi aan arinta la dhamayn karin turjubaan la'aantiis.
Waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin dheeraad ah oo isticmaalka turjubaanka ku saabsan bogga internetka ee Infopankki oo ku qoran afaf kala duwan.